Al Shabaab oo Weerar cagmarin ah kadib lawareegay deegaanka Cammaara [Warbixin].
Beesha Tunni oo sheegtay in uusan metelin Guddoomiyaha Baarlamaanka maamulka KGS [Dhageyso].
Dhageyso: Falanqeyn ku saabsan dagaalkii lagu hoobtay ee Guriceel.
Al Shabaab oo Sedax Askari ku dilay Muqdisho iyo duleedkeeda.
Ciidamada maamulka 'Galmudug' oo si buuxda ula wareegay magaalada Guriceel.
Xoogaga TPLF oo qarka usaaran in ay qabsadaan magaalada Dessie.
Saacado deganaashiyo ah kadib dagaal culus oo dib uga qarxay Guriceel.
Tuesday August 24, 2021 - 06:20:25 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Wararka ka imaanaya gobolka Mudug ayaa sheegaya in khasaara lixaad leh uu ka dhashay weerar cagmarin ah oo Al Shabaab ay ku qaadeen saldhigyo melleteri.
Weerarka oo ku bilaawday weerar naf hurnimo oo uu fuliyay dagaalyahan kaxaynayay gaari walxaha qarxa lagasoo buuxiyay waxaana xigay weerar toos ah oo ciidamo hubaysan ay ku qaadeen saldhigyo ciidan.
ilo wareedyo ayaa noo xaqiijiyay in ciidamada wilaayada Islaamiga Mudug ay gacanta ku dhigeen gaadiid dagaal iyo saanado melleteri balse illaa iyo hadda faah faahin dheeri ah lagama hayo khasaaraha ka dhashay dagaalkii Camaara.
War rasmi ah oo kasoo baxay taliska ciidanka Al Shabaab ayaa lagu sheegay in dagaalkii Camaara ay ku qabsadeen 15 gaari oo 12 kamida ah yihiin Tikniko halka 2da kale ay yihiin BG xamuul ah iyo booyad, sidoo kale dhimashada ciidamada Galmudug ee dagaalkii maanta ayaa gaartay 31.
Ciidamada maanta lagu laayay deegaanka Cammaara ayaa laba bilood ka hor duullaano ku qaaday deegaanno dhaca Koonfurta gobolka Mudug iyagoo taageero dhanka cirka ah ka helayay diyaaradaha dagaalka dowladda Mareykanka.
Mareykanka oo hakiyay dhaqaalihii uu siin jiray Suudaan kadib Inqilaabkii melleteri.
Al-Shabaab iyo Dagaalka Guriceel…Maqaal. W/Q Dhuunkaal
Weeraro lagu beegsaday saldhigyo Melleteri oo ka dhacay Jubbada hoose.
Isbahaysiga Carabta oo 88 weerar ku beegsaday Xuuthiyiinta Yemen.
Weeraro lagu dilay askar huwan ah oo ka dhacay deegaanno katirsan Sh/dhexe iyo Sh/hoose.
Ciidamo Itoobiyaan ah oo ku dhintay weerar ka dhacay degmada Buurhakaba.
Al Shabaab oo 8 askari Kenyaan ah ku dilay deegaan katirsan Jubbada Hoose.
Sarkaal katirsan PS-ta Puntland oo Duleedka Boosaaso lagu dilay iyo weerar ka dhacay Af Urur.
Sawirro: Hay'ad samafal oo gargaar ka qeybisay deegaan katirsan wilaayada Islaamiga Bay.
04/10/2021 - 20:07:58
Al-Shabaab oo soo bandhigay hubkii iyo gaadiidkii ay ku qabsadeen weerarkii deegaanka Cammaara [Sawirro].
25/08/2021 - 14:59:13
Sawirro: Fantasyo Cajiib ah oo lagu qabtay magaalada Ceelbuur.
21/07/2021 - 16:58:07
Sawirro: Sida looga ciiday Degmada Jilib ee gobolka Jubbada dhexe.
20/07/2021 - 20:24:59
Sawirro: Al Shabaab oo soo bandhigtay Manhajka Waxbarashada dugsiga dhexe.
16/06/2021 - 16:50:35
Sawirro: Diyaaradaha Kenya oo Shacab ku xasuuqay degmada Ceel Cadde.
03/06/2021 - 12:05:51
Sawirro+Cod: Guddiga dhismaha Masjid Jaamaca Bu'aale oo warbixin soo saaray baaq cusubna diray.
23/05/2021 - 12:55:34
Sawirro: Wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda Falasdiin iyo Yahuudda oo xasuuq wadda.
19/05/2021 - 11:19:16
Sawirro: Dibad bax loogasoo horjeedo Xasuuqa Falasdiin oo ka dhacay Hiiraan.
18/05/2021 - 11:55:15
Sawirro: Dabaal degyada Ciidul Fidri oo lagusoo afmeeray wilaayaatka islaamiga ah.
15/05/2021 - 09:28:32